२८ यात्रु सवार बस दुर्घटनाग्रस्त, १५ जना घाइते, कसरी भयो दुर्घटना ? – Sunaulo Nepal TV
काठमाडौं । सल्यानको कपुरकोट सोलावाङ्गमा यात्रुवाहक बस दुर्घटनामा परेको छ । दाङबाट रुकुम पश्चिमका लागि जाँदै गरेको रा १ ख १७९२ बस सल्यान कपुरकोट ३ मा दुर्घटनाग्रस्त भएको हो । गाडी दुर्घटना हुँदा १५ जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
Previous सिद्धार्थलाई बिदाइ गर्न अस्वास्थ्य अवस्थामा पनि रुदै आइपुगिन् प्रेमिका शहनाज, उनको अवस्था देखेर धेरैको आँखा रसाए, हेर्नुहोस्,मनमा अलिकति दया माया छ भने #RIP लेख्नुहोला !
Next हिरासत बाटै हरी उदासीले पठाए कडा यस्तो सन्देश “जहाँ बसे पनि सिंह राजा हो” हेर्दै जाओ-भिडियो सहित